Ku dhaji maqaal ku saabsan madal dhaqameedka Afrikhepri - Afrikhepri Fondation
Ku dhaji maqaal ku saabsan madal dhaqameedka Afrikhepri
Afrikhepri waa mid ka mid ah adeegsiga bulshada ee wadaagida Aqoonta. Uma shaqeyso faa iidada dadka goobaabin yar laakiin danta guud. Waxay ujeeddadeedu tahay inay kor u qaaddo dhaqanka adduunka oo dhan iyada oo loo adeegsado websaydhkeeda si loo soo saaro farqiga u dhexeeya dadka oo loo keeno miyir wadareed xaalad cusub.
Halkan hoose ka dhagayso astaamaha aad dooratay inaad ku xidho oo aad ku dhejiso maqaal ama fiidiyo madal dhaqameedkan
Halkan hoose guji si aad ugu qorto maqaal barta
Runtu waa in loo muujiyaa qof walba maxaa yeelay "laambad kama shidanno in aannu ku hoos dhigno buste hoostiisa, laakiin waxaan dul saaraynaa laambadda, oo waxay shidaysaa kuwa guriga jooga". Markaa waajibkayagu waa inaanu la wadaagno aqoonta dhammaan wiilasha Kaama si nalka u iftiimiyo dhammaan dadka deggan guriga Life (Per Ânkh).
category WAQOOYINKA IYO FASHIGA DEJINTA AFRICAN CUISINE HOGAANADA MADAXA CULUS documentary CARRUURTA DEEGAAN ADDOONSIGA Xaalad dhaqameed XAALADAHA SHAQADA AFRICAN WOMEN FURSADAHA WALBA GARGAARKA DEGDEGA IYO DALKA AFRICAN INITIATIONS DIIWAANGELINTA / login BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA GARGAARKA PARADIGM
Kelvin Doe, oo ah dhalinyaro ka timid Sierra Leone, waxay dhalinaysaa koronto koronto
Machadka Body Paris, oo ah iskuulkii ugu horeeyay ee timo jarjarey oo ku takhasusay timaha Afro iyo Yurub
Farshaxanka farshaxanka iyo bilowga Afrika